Shirri hattootaa sochicha hingufachiisu
Shirri hattootaa sochicha hingufachiisu Featured
Seenaa Itoophiyaa keessatti durii kaasee ibsi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin darbu takkaa dhageettii argateefi galateeffamee kan hinbeekne yoo ta’u, kan ammaa kun raajii nama jechisiisa.
Namoonni takkaa marii Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiin taasifamu hordofanii hinbeekneefi eddii hordofuu addaa kutanii waggoota lakkoofsisanillee Wixata darbe haala ajaa'ibaatiin ibsa ministirri muummeen kennaniif ijaafi gurra kennaniiru.
Dargaggoonni Itoophiyaa yeroo dheeraa tapha kubbaa miilaa gareedhaan ilaaluu jaalatan ibsa Doktar Abiyyi Ahmad kennan dhagahuuf tapha kubbaa miilaa addunyaa cufsiisanii gurrasaanii kennanii dhaggeeffachaa turaniiru.
Inni kaan hanga ibsichi dhumutti taaksii ittiin imalaa ture keessaa hinbuunu jechuun lafa dhufanitti qarshii kaffalanii dhaggeeffataa of deebi'aa turuunsaanii akka mudannoo addaatti ibsamaa jira.
Dargaggoon dura bu'aa biyyaatiif jaalala akkanaa agarsiisu takkaa mul’atee wan hinbeekneef kun eenaa jalqabaati jechuun nidandahama. Bu’aan gama Doktar Abiyyiin yeroo gabaabaa keessatti deebi'aa jiru dargaggootaaf hawaasa bal’aa kan hammate waan ta’eef hiriirri deeggarsaa “Ani Doktar Abiyyi waliinan jira” jedhuufi kan isaan jajjabeessu taasifamuunsaa fedhii hawaasaatiin ta'uunis hubatamuu qaba.
Miidiyaaleen Itoophiyaa dhuunfaafi mootummaa akka tibbanaa argaa dhageettii argataniiru jechuun hindandahamu. Dur oggaa ibsi ykn mariin akkanaa eegalu chaanaalii raadiyoos ta'e televizhinii gara biraatti jijjiiramaayyu. Kanaafi, egaa seenaa boqonnaa haaraan itti galmaa'edha kan ejdhameef.
Raafamni siyaasaa hammaachuun tasgabbiifi nageenyi biyyattii sadarkaa yaaddessaa keessa wayita galee turetti hoogganaan dhugaa sagalee ummata bal’aatiin deeggaramee kulkula madaa ummata keessa jiru dhoosuun haara galfiifi boqonnaan ce'umsaa akka lafa qabatu tasiseera.
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad hoogganaa yeroon barbaaduufi dargaggootaafi hawaasa bal'aadhaan deeggarsa olaanaa qabu waan ta’eef Musee dhaloota kakuu haaraa gara bilisummaatti ceessisuuf muudamedha jechuun nidanda'ama.
Ummatni kaleessa biyyarraa godaanaa ture har’a gara biyyaatti kan hidhaa biyya hambaa keessa tures sosochii hoogganaa kanaan gara biyyasaatti deebi'aa jira kun jijjiirama hawaasni bal’aa barbaadaa tureedha.
Yaata’uutii harcaatonni bu’aa Ministira Muummee Doktar Abiyyiin galmaa'aa jiru kanatti hingammanne tokko tokko hiikamuu hidhamtootaafi murtee darbaa jiru akkasumas tarkaanfiilee jijjiirramaa argamaa jiranitti gufuu ta’uuf shira xaxaa jiraachuunsaanii hawaasaaf ifa.
Doktar Abiyyi Ahmad bu’aa qabsoo qeerroowwan Itoophiyaa ta’uusaaniirraa kan ka’e harka mirgaa dargaggootaa ta’anii qalbii dargaggootaa keessa kan bulaniidha.
Yeroo gabaabaa, ji’a sadii hinguunne keessatti hojii waggoota 27 keessatti hinraawwatamiin turan haala dinqisiisaa ta’een raawwachuun ummata bal’aafi addunyaa afaan qabachiisaa jiru.
Kun ta’us harcaatonni furgaasaan siyaasaa harkaa badeefi hanna 'hojii' godhatanii turan karaa dhoksaafi ifaatiin bu’aa galmaa'aa jiru kana duubatti harkisuuf yaalanis ummata wajjin walitti bu’uu waan ta’eef garaatti gubachaa jiru.
Doktar Abiyyi ibsa haala yeroorratti tibbana Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf kennaniin gaaffiilee akka sababaatti sochii haaromsichaa gufachiisuuf ka’an wayita deebisanitti hiikamuu hidhamtootaaf ijji isin hindiimatiin kan jedhu ture.
Eenyu laata kan ijjisaa diimatu, eenyu laata kan lammii mana hidhaa dukkanaa'aa keessatti ukkaamsaa ture, eenyu laata kan qaama dargaggootaa hir’isaa ture? wayita jedhanii gaafatanitti harcaatonni aangoo dahoo godhachuun ukkaamsaa gaggeessaa turan of baruunsaanii hinoolle.
Kaleessi seenaadha har’i guyyaa jijjiiramaafi iftoominaati. Akka kaleessaa wanti hawaasa jalaa dhokatu hinjiru.
Ijaarsi sirna federaalizmii dimokraasii babal’isuun hawaasa fayyadamummaansaa hattootaafi saamtootaan uggurame bakkatti deebisuu waan ta’eef ummata waliin hojjenna deebii jedhu wayita kennan dargaggoonni ni qabbaneeffatu, humnoonni badiifi harcaatonni ammoo garaatti gubatu.
Harcaatonni furgaasaan siyaasaa harkaa badeefi hattoonni boruusaaniif sodaachuun gamanumaa shira xaxuun sabootaafi sablammiilee kaleessa waliin jiraachaa turan walitti buusuun sirna ukkaamsaa kaleessa gaggeessaa turanitti lubbuu horuuf yaalan jiraachuu ministirri muummeen yoo dubbatan, faaydaa ummataa duubatti deebisuuf yaaluun abidda dibametti quba kaahuu akka ta’e jechasaaniin akeekkachiisaniiru.
Har’as taanaan boru sosochii siyaasa tarkaanfachiisaa Ministirri Muummee Doktar Abiyyi taasisaa jiran gufachiisuuf yaaluun faayidaa ummata bal’aa mirkanaa'aa jiru duubatti harkisuu waan ta’eef miira hawaasaa miidhuurraa of qusachuun dirqama.
Gamanaumaa wayita madaalamu biiftuun dimokraasii dhaloota kakuu haaraa Itoophiyaaf kan baate waan fakkaattuuf qeerroon, qarreen, jaarsi jaartiin, xiqqaan, guddaan ministira muummee dhaloota kakuu haaraa qabsoo hadhaa'aan argame kana cinaa dhaabachuun barbaachisaadha.
Walumaa galatti harcaatonni furgaasaan siyaasaa isaan harkaa bade kallattii nageenya biyyittii gara jeequmsaatti geeddaruun hannaafi saamicha kanaan dura raawwatan biyyaa baafachuuf carraqqii guddaa gochaa jiraachuusaanii qeeqa kaasaa jiranirraa hubachuun kan dandahamu waan ta’eef bu’aa qabsoo ummata bal’aa mufattootaan akka hingufanneef kutaaleen hawaasaa marti dammaqinaafi abbummaan hordofuu qaba.
Torban kana/This_Week 4880
Guyyaa mara/All_Days 1642475